Musharrixiinta Jubbaland ma amni ayay isku hayaan mise kursi? - BBC News Somali
Bashiir Maxamed Caato BBC Somali, Nairobi
27 Febraayo 2019
Image caption Musharixiinta Jubbaland ma amni ayay isku hayaan mise kursi?
Maamulka Jubbaland ayaa xalay war kasoo saaray qoddoba la xiriir amniga iyo doorashooyinka la filayo in Jubbaland ay ka dhacaan sannadkan 2019-ka.
Golaha amniga ee Jubbaland ayaa sheegay in doorashooyinkii Jubbaland ay ku dhacayaan xiligoodi, ayna doonayaan inay adkeeyaan ammaanka xiliga doorashada iyo kahor ba.
"Guddiga wuxuu bogaadiyay hawlgalada joogtada ah ee ay wadaan ciidammada dowlad goboleedka Jubbaland, ciidammada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amiisom". Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Jubbaland.
Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in ol'olaha doorashooyinka looga dambeeyo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland, waxaana ay intaa raaciyeen in cid kasta ay ka reeban tahay khalkhal gelinta amniga iyo ol'ole sharci darro ah inta ka horeysa dhisida guddiga doorashooyinka.
Waxaana ay intaa raaciyeen "In amniga musharixiinta ay dammaanad qaadeyso, mas'uul na ka tahay dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaana aanan la oggoleyn ilaalo gaar ah".
Dhawaan ayay aheyd markii Cabdinaasir Seeraar oo ahaa afhayeenkii hore ee Jubbaland uu magaalada kismaayo kaga dhawaaqay in uu yahay musharax, isagoo ay hareer taagan yihiin ciidamo la sheegay in isaga ay daacad u yihiin.
Go'aanka ka soo baxay mas'uuliyiinta amniga ee Jubbaland ayaa waxaa ka hadlay Cabdirashiid Xidig oo kamid ah siyaasiyiinta Jubbaland.
"Qodobka ku saabsan Ilaalada musharixiinta waxaa laga ma maarmaan ah in murashax kastaa haysto ilaalo kooban oo uu ku kalsoon yahay naftiisana ku aamini karo, waxaase marnaba aan suuragal noqon doonin in murashaxiinta loo keeno ilaalo aysan ku kalsooneyn, Lana hubin meesha laga keenay". Ayuu yiri Xidig.
Image caption Go'aanka Jubbaland
Waxaa kale oo uu sheegay in madaxweynaha hada talada haya oo uu sheegay in la filayo inuu murashixiinta ka mid yahay uu talada iyo xuquuqda kala sinaado murashaxiinta kale, si geedi socodka doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo, lagu na wada qanci karo.
Sida muuqato musharixiin badan ayaa hami uga jiraa inay wax ka noqdaan Jubbaland, hasayeeshee waxaa la isweydiin karaa waxa dhabta ah ee ay isku hayaan mas'uuliyiinta Jubbaland ee hadda xilka haya iyo kuwa uu damaca ku jiro.
"Kismaayo way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee Garowe, Hargeisa iyo Baydhabo oo waxay leeyihiin odayaal loo laabto; Horta waxa loo socdo amni ma ahan ee waa Kursi, kuwa soo socda ee doorashada u taagan in meesha burburto ama dhibato dhacdo dani ugu ma jirto, sida ugu dhibyar waxa weeye wax raali la isaga yahay oo shacabka, musharixiinta iyo maamulku raali ka yahay, wana in odayaasha dhaqanka ee Jubbaland awood la siiya oo ay noqdaan kuwa Puntland oo kale oo haddii ay wax dhacaan loo laaban karo". Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Dhaqane oo ah wasiir hore.
Dhaqane ayaa sidoo kale sheegay in laga ma maarmaan ay tahay yagleelidda guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka, si haddii ay wax dhacaan iyaga loogu laabto.
Sida ku cad warqada ka soo baxday maamulka Jubbaland ee lagu sheegay in musharixiinta ay ka reeban tahay ol'ole sharci darro ah inta ka horeyso dhisida guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, waxay dadka qaar qabaan walaac ah in taasi ay keeni karta in musharixiinta kale aysan wax talo ah ku lahaanin hirgelinta guddiga doorashada.
Sidoo kale warqada ayaa waxaan ku caddeyn doorka dowladda federaalka ay ku leedahay xaqiijinta amniga doorashada iyo kan musharixiinta.
Inkastoo aysan caddeyn cidda soo xuleysa guddiga doorashada ee Jubbaland ayaa haddana waxaa muuqata in musharixiin badan oo daneenaya xilka madaxweynenimo ay maamulka madaxweyne Axmed Madoobe ku eedeynayaan in aanan loo dhameyn go'aanada ku saabsan doorashada jubbaland.